Nyanzvi Dhizaina Simbi Yekugadzira Shed Mutengo - China Qingdao Xinmao ZT Simbi
Unyanzvi Dhizaina Simbi Yekugadzira Factory Yadeurwa Mutengo
Professional Design Steel azoshandiswa Factory rakateurwa Price
Simbi mamiriro musangano yaisanganisira chikuru chivakwa (simbi danda / girder, simbi mbiru / mbiru), yechipiri mamiriro (padenga uye madziro purlin, simbi bracing, tai-bhawa nezvimwewo), musu uye mahwindo, nezvimwewo zvinhu.
Inidustry: Wokeshop, yokuchengetera zvinhu, uye vamwe indasitiri zvivako.
Commerce: Mall, hotel, kuratidzwa imba, chemahofisi.
Public: School, raibhurari, nhandare dzemitambo, churce, etc.
1. Prefab yakawedzerwa. Kurumidza uye nyore kuisirwa, kuchengetedza nguva uye kuchengetedza basa.
2. Dhizaini yakasarudzika, marongero siyana marongerwo, akanaka pakuonekwa, mavara akasiyana kuti masvingo uye denga
3. kurema uremu, nyore kufamba uye mutengo okuponesa,
4. Inobviswa, convenient vaungane kana nekukatanura. Fast kuvaka uye nyore kugadzwa
5. Zvakatipoteredza, Kuzvigadzira Patsva, hapana tsvina yakabereka
6. Simba rakakwirira, anoziva kuramba giredhi 8 kudengenyeka
humbowo hwemvura, humbowo hwemoto; inogona kudzivisa mhepo yakasimba uye sinou inorema.
7 . Hupenyu hwakareba. inogona kushandiswa
8. Wide span, kuroora kana akawanda zvaiva, anogona kuva kunonyanyisa span kure 36m pasina pakati pembiru.
1) Saizi: MOQ ndeye 100m2, upamhi X kureba X eave kukwirira, materu edenga
2) Nyora: Imwe chete yakatsvedza, mbiri yakatsetseka, muti wakatsetseka; Yega span, mbiri-span, Multi-span, imwe chete pasi, kaviri pasi!
3) Base: simende nesimbi hwaro mabhaudhi
4) Column uye danda: Chinyorwa Q345 (S355JR) kana Q235 (S235JR) simbi, ese mabhaudhi kubatana! Yakatwasuka chikamu chemuchinjikwa kana chinowoneka chikamu chemuchinjikwa!
5) Bracing: X-mhando kana V-mhando kana imwe mhando bracing yakaitwa kubva kona, yakatenderera pombi, nezvimwewo
6) C kana z purlin: Saizi kubva kuC120 ~ C320, Z100 ~ Z200
7) Roof uye madziro epaneru: Imwe-yakavaravara yakasarudzika simbi sheet0.326 ~ 0.8mm gobvu, (1150mm yakafara), kana sandwich pani ine EPS, ROCK WOOL, PU nezvimwewo kuputira ukobvu kutenderera 50mm ~ 100mm,
8) Pamusoro: Nzvimbo mbiri dzeAnti-ngura Painting!
Nokuti munhu anoda kubetserwa mashoko
Kana uchida isu kugadzira kwamuri, pls kupa isu inotevera parameter
Kukura: upamhi X kureba X eave kukwirira, materu edenga
1) Rarama mutoro padenga (KN / M2) Wind kumhanya (KM / H)
2) Basa rekuvaka, yemukati equipmet
3) Icho chakakosha chinodiwa pane basa
4) Earthquake mutoro kana uine. Mutoro wechando (KG / M2)
5) Zvinoda madhoo nemahwindo
6) Crane (kana iine), Crane span, crane kusimudza kukwirira, max kusimudza kugona, max vhiri kumanikidza uye min vhiri kumanikidza!
Steel Structure Maitiro:
1. Gadzirira mbishi zvigadzirwa: cheka simbi ndiro kana kushandisa internation saizi H chikamu simbi uye kona kona simbi, kutenderera chubhu, kutenderera simbi, mativi chubhu nezvimwe.
2. Gungano uye Welding: maWelders edu anoteedzera madhirowa ekuunganidza nhengo dzesimbi uye kuasanganisa pamwe chete sedanda rose / mbiru / brace uye zvichingodaro; (Wedu wemuongorori anoongorora zvidimbu zvesimbi mushure mekupedzisa kupera, ino ndiyo yekutanga mhando cheki)
3. Sand blast: Mushure mekupedzisa kupisa uye kukwiza, jecha redu blast athari inogona kusvika kune internation 2.5 yakakwira giredhi, yakanaka kwazvo kurwisa ngura; (Sekondari yemhando cheki)
4.Paint: Mukati maawa maviri mushure mejecha kuputika, nhengo dzesimbi dzese dzinofanirwa kuve pendi. Mutengi anogona kusarudza chero ruvara uye chero mhando yepende. (Yechitatu cheki cheki)
6.Kutakura uye kurodha: Kana vatengi vachida kuti isu titakure zvinhu nepedyo midziyo, isu tinorongedza simbi mamiriro enhengo imwe neimwe pane simbi skid uye kusunga iyo yese simbi package zvakanaka. ( Yechina yemhando cheki)
Apex Main simbi furemu pasina kurongedza mutoro muna 40 'yekare kana HQ, denga uye rusvingo Panel mutoro muna 40' HQ! Kana maererano nezvinodiwa nevatengi.
* Kuisirwa sumo / CD / dhizaini yekuisirwa inozopihwa kana zvichidikanwa.
* Mainjiniya nevashandi vanogona kutumirwa kune dzimwe nyika kunotungamirwa uye kuiswa.
Zvese zvinhu zvakaiswa kumberi mumudziyo uye iwe unongoda kuzviisa pane saiti, batanidza kumagetsi nemvura
1. umbwa mugore ra2003, nyanzvi prefab mudzimba dzakasiyana-siyana uye mudziyo dzimba uye simbi mamiriro kugadzira.
2. Vanopfuura makumi mashanu veR & D vashandi uye anopfuura 400 vashandi
3 . 35, 000 mativi maters fekitari, azere mutsetse kugadzirwa
4. Kufanirwa: CE (DIN18800), ISO9001, BV, SGS; (CSA, AS / NZS, UL nezvimwewo)
5. Kubudirira kwekuvaka kwakanyanya, kukurukura nguva achava mukati memazuva 20 kusvika 30
a. Iwe uri wekambani yakaita sei, fekitori kana kambani yekutengesa?
Isu tiri simbi yekuvaka zvinhu zvekugadzira muDezhou China. Uye isu tinotengesa hofisi muQingdao, inova iri nyore kune Vatengi uye inoshanda kune yekunze. Isu tanga tichiwana mukurumbira wakanaka pakati pevatengi vedu kune yedu yehunyanzvi, inodziya uye inofungisisa sevhisi. Nekuti isu tinoziva kuti refu mazwi bhizinesi anoenderana nehunhu kudzora, mutengo, kurongedza, nguva yekuendesa.
b. Ko kambani yako ikambani kana kambani yekutengesa?
Isu tiri fekitori, saka uchafadzwa nemutengo wakanakisa uye nemakwikwi mutengo. Fekitori yedu inovhara nzvimbo yemakumi mashanu emakumi mashanu emamirimita.
c. Ndezvipi zvakanakira zvigadzirwa zvako uye kambani?
a) kugadzirisa dhizaini kunowanikwa kubva kwatiri, kugadzirisa musika uye kushandisa nharaunda zvirinani, uye kubatsira vatengi kuwana makwikwi akawanda mumusika wako.
b) hwakareba chigadzirwa chigadzirwa.
d. Unogona here kupa kwekugadzira basa?
Ehe, isu tine vanopfuura zana mainjiniya ekugadzira. Isu taigona kugadzira izere mhinduro dhizaini sekuenderana nezvinodiwa zvako. Ivo vanoshandisa software: Auto CAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) V12.0.etc.
e. Iwe unopa anotungamira ekuisa pane saiti mhiri kwemakungwa?
Hongu, tinogona kupa sevhisi yekumisikidza, kutarisira uye kudzidzisa nekuwedzera. Tinogona kutumira yedu yehunyanzvi mainjiniya mainjiniya kuongorora kumisikidza pane saiti mhiri kwemakungwa. Kunze kwezvo, Isu zvakare tine yedu pachedu inotungamira yekumisikidza timu ine vanhu vanopfuura makumi matatu.
Vakabudirira munyika zhinji, senge Iraq, Dubai, South Africa, Algerial, Ghana, Gabon, Tajikistan, Burkina Faso, Panama, Australia.
Vatengi vanoshanyira fekitori yedu
Wedzera: Kamuri 201, Kuvaka 32, Tian'an Cyber ​​Park, Chengyang, Qingdao, China
Tel: 0086-532-67760041 Nhare: + 86-18300293112
Previous: Professional Manufacturer kuti Steel Structure Workshop kubva China
Next: Kwakakurudzira Prefab Industrial Structure Steel Warehouse Manufacturer
Prefab Simbi Kuvaka Warehouse
Simbi Yakavakirwa Multy Nhau Kuvaka
Simbi Sisitimu factoy yakadeurwa
Prefab simbi pepuranga mamiriro chivakwa.